हाम्राे पिपलबाेट » सकियो राष्ट्रपतिले दिएको समय, कसले पाउलान् प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति ? सकियो राष्ट्रपतिले दिएको समय, कसले पाउलान् प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति ? – हाम्राे पिपलबाेट
सकियो राष्ट्रपतिले दिएको समय, कसले पाउलान् प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति ?
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि दिएको समय सकिएको छ । बिहीबार राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि शुक्रबार ;साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएकी थिइन् ।
यो समयमा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फेरि दावी प्रस्तुत गरेका छन् । उनले आफ्नो पक्षमा १५३ सांसद रहेको दावी गरेका छन् ।
यस्तै प्रधानमन्त्रीको दावी गर्दै विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेका छन् ।
अब राष्ट्रपतिले देउवा वा ओली कसलाई नियुक्त गर्ने भन्नेमा निर्णय लिनेछिन् ।
ओलीले एमालेका सबै १२१ जना सांसदहरु रहेको दाबी गरेका छन् । जबकि उनकै दलका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल विपक्षी नेताहरुसँग शीतलनिवासमै राष्ट्रपतिलाई भेट्न शरीर पुगेका छन् । माधव पक्षका सांसदहरुले विपक्षी गठबन्धनमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले ओलीसँग १२१ सांसद नरहेको कागजबाटै पुष्टि हुने कुरा हो ।
संविधानको धारा ७६ (५) ले दलगत रुपमा नभएर व्यक्तिलाई मात्रै चिन्ने संविधानविदहरुले बताउँदै आएका छन् ।
अब यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले के गर्लिन् ? विपक्षी दलको बहुमतको हस्ताक्षर ग्रहण गर्छिन् या प्रधानमन्त्री ओलीको कुरा सुन्छिन् ?यसबारे प्रष्ट हुन केही समय अझै कुर्नुपर्नेछ ।